माधव नेपाल समूहमा फुट, ४ नेताले वार्तामा सक्रियलाई दिए यस्तो चेतावनी « रिपोर्टर्स नेपाल
माधव नेपाल समूहमा फुट, ४ नेताले वार्तामा सक्रियलाई दिए यस्तो चेतावनी
काठमाडौं, २१ जेठ । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४ नेताहरुले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जना नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको अवस्थामा वार्ता नै हुँदैन भन्ने अडान लिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वार्तालाई नाटकको भन्दै आफूहरुबीचको एकतालाई छिन्न भिन्न गर्ने, अरु राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्य भंग गर्ने उद्देश्य बोकेको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पोलिटब्यूरो सदस्यहरु डा. विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, प्रकाश ज्वाला र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईल वार्ता गर्दै हिंडेका आफ्नै पक्षका केही नेताहरुमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । १९ जेठमा नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित स्थायी कमिटीलाई पत्र लेख्दै ४ नेताहरुले ओलीले पछिल्लो समय प्रदर्शन गरेको लचकतालाई फुट ल्याउने चालबाजी भनेका छन् ।
‘११ जना नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेर वार्ता नै हुँदैन भन्ने अडान लिनुपर्ने होइन र ?’ माधव नेपाल पक्षीय ४ नेताले आफ्नै पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले वातालाई नाटकको संज्ञा दिदै सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनःस्थापनाको बहसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य बोकिएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
४ नेताहरुले एमाले एकताका लागि गठित कार्यदलमा रहेका नेताहरुमध्ये वार्ता गर्दै हिंडेकाहरुको कार्यशैलीको समेत आलोचना गरे । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौं ।’ उनीहरुले ओलीसँग सम्झौता गरेमा यथास्थितिवादको खाल्डोमा पुरिनसक्ने खतरा समेत औल्याएका छन् ।
गठबन्धनको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाउने सहमति
काठमाडौं, ९ साउन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह
प्रचण्डलाई भीम रावलको प्रश्न : हाम्रो स्थितिमा हुनुभएको भए के तपाईँ हाम्रोजस्तै त्याग गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो ?
काठमाडौं, ९ साउन । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले आफूले सांसद पदबाट
समाजसेवी कुँवरको ‘निरन्तर समाजसेवा” नामक पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं, ९ साउन । समाजसेवी ताराबहादुर कुँवरद्वारा लिखित ‘निरन्तर समाजसेवा’ नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ।
काठमाडौं, ९ साउन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव
टोकियो ओलम्पिकमा चीन शिर्ष स्थानमा, यी देशले जिते स्वर्ण
एजेन्सी, ९ साउन । टोकियो ओलम्पिकमा पदकका लागि आजबाट प्रतिष्पर्धा सुरु भएको छ । पदकका
सरकारलाई सफल बनाउने गठबन्धनको निर्णय, माधव नेपाल पनि एकसाथ
साउन ९, काठमाण्डौ । शनिवार साँझ बसेको सत्तापक्षको गठबन्धन बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सफल
काठमाडौं, ९ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
काठमाडौं, साउन १० । धितोपत्र व्यवसायका लागि थप ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने भएको छ ।
सरकारकै कारण नेपालमा लगानीको अवरोधः अमेरिकी विदेश मन्त्रालय
काठमाडौं, साउन १० । पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका सरकारहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेको दाबी गर्दै विश्व
निर्यात खर्बभन्दा माथिः भटमासको तेलको अंश ३८ प्रतिशत
काठमाडौं, साउन १० । नेपालले पहिलोपटक वैदेशिक व्यापारमा एक खर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको छ ।